Ihe odide nke Timbuktu - Afrikhepri Fondation
Tọsde, Jenụwarị 14, 2021
Ihe odide nke Timbuktu
Au obi nke Sub-Sahara Africa nke XVe na XVIe ọtụtụ narị afọ, Timbuktu bụ obodo na-eme nke ọma na-adọta ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ, nke Emperorhaï na-echebe ya. Nke a bụ ebe ihe ọmụma na-ekesa ma gbasaa. Zi ihe na akwụkwọ wee baa ụba na ọrụ aka niile were uru: ndị ode akwụkwọ, ndị na-ere akwụkwọ, ndị na-emegharị akwụkwọ, ndị na-edobe akwụkwọ, ndị ntụgharị okwu. Anyị si n'Ijipt, Andalusia, Morocco ma ọ bụ Alaeze Ukwu Ghana iji gaa ọmụmụ ihe na Mahadum nke Sankoré. N'ihi ya, na ebube zuru oke, obodo ahụ nabatara na XVe narị afọ karịa ụmụ akwụkwọ 25 000.
Na akpụkpọ anụ, na akwụkwọ nke ọwụwa, n'ubu ubu kamel ma ọ bụ akpụkpọ atụrụ, a na-ahụ ihe niile, na-ekwu maka ya, na-ezo aka: ọnụahịa nnu na ngwa nri, omume iwu, ahịa, nkọwa ọgwụ pharmacopoeia (gụnyere ederede gbasara mmetụta ụtaba na-emerụ ahụ), ndụmọdụ gbasara mmekọahụ, ụtọ asụsụ ma ọ bụ mgbakọ na mwepụ.
Mgbe alaeze Songhai daa na narị afọ nke XNUMXe echefuola ihe odide ndị a, na-edebe ha n'ime ahịhịa na-eri nchara na ájá uzuzu, nke nnu na ájá riri. Mana ihe na-agbanwe agbanwe: ndị nketa nke nnukwu ezinaụlọ na-emepe ọba akwụkwọ nkeonwe, ekepụtara Ahmed Institute, UNesco na ndị nyocha gburugburu ụwa nwere mmasị na ya. Prọfesọ Georges Bohas na-eme atụmatụ na ọ bụ naanị 1% nke ederede ka a sụgharịrị na 10% katalọgụ. N'ime akwụkwọ a, nke jikọtara akụkọ ihe mere eme nke Timbuktu, onyonyo nke ederede ndị a dị oke ọnụ na onyinye nke mmadụ ise kachasị ukwuu n'Africa, Jean-Michel Djian jụrụ onwe ya: gịnị kpatara nlekọta dị otú ahụ? Gịnị ka ihe odide ndị a na-ezo? Gịnị ka ha nwere ike ịkụziri anyị?
4 ọhụrụ site na .25,00 XNUMX
7 ejiri site na 19,81
Emelitere ikpeazụ na Jenụwarị 14, 2021 1:54
Atiya AKWỤKWỌ Ị GA-EFE
Okwu mmalite nke Grobli Zirignon "Point de suture" nke Tanella Boni dere
Lelee Eziokwu Banyere Brian Banks (2019)
Ozi, nnukwu ibé - Akwụkwọ edemede (2018)
Akwụkwọ nke Esoteric Christianity (PDF)